Modern kokulandela amabhikhoni zinezikhathi compactness yabo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi antenna basebenzisa uhlobo esakhelwe ngaphakathi. Amamodeli ivame imvamisa low, kodwa kulokhu, kuya kakhulu ngokuthi umakhi. Amadivayisi ethandwa kakhulu lolu hlobo ezibhekwa phakathi abashayeli.
Ngakho, nemoto eyebiwe kungenziwa yashesha. Nokho, emakethe futhi inikeza zokuguqulwa ukulandelela indoda. Itholakala ezihlukile futhi abasakwazi ezahlukene nemingcele. Kuyinto isilinganiso wokukhanya esifundeni ayizinkulungwane 4. Hlikihla. Nokho, ungenza bebodwa.
kudivayisi okuzenzela ishayela inhlamvu
Nge-pulse kuvuse kanjani ukwenza ethungatha beacon? Empeleni ukuqoqa imodeli yalolu hlobo ulula. Okokuqala kubalulekile ukukhetha eliphezulu LDR. Njengomthetho, isetshenziswa shortwave. Ngenxa yalezi zinjongo kuzodinga okwengeziwe nokusebenza yokukhulisa umsindo uhlobo. Ngqo transistors elisetshenziswa okuguquguqukayo yamuva, kodwa ukushintshwa reflex luvamile.
Ngaphezu kwalokho, ukwenza okunjalo kokulandela amabhikhoni ngezandla zabo, udinga ukufaka i-rectifiers for kangcono isignali conduction. Njengoba ukuphazamiseka amafilithi amadivaysi ukuphatha izinhlobo ezahlukene. abalawuli zisetshenziselwa ulungise beacons. Njengomthetho, zikhona uhlobo emakethe epholisayo. Ngqo kuvuse ezibalulekile ukufaka eduze Transistor. Kulokhu, amandla kudingeke ukuba walubeka rectifier.
Idivayisi amplifier inertial
Nge-amplifier yalolu hlobo njengomthombo wokukhanya ethungatha ukwenza ekhaya? Ukuze uqale umsebenzi inhlangano, ngokuyinhloko kuvuna LDR ejwayelekile. Kulokhu, lo rectifier Ungakhetha PP20 ngochungechunge oluthi imodeli. Kungaleso sikhathi kuphela lapho soldered transistors kudivayisi usebenzisa Blowtorch. Ekupheleni umsebenzi ngeke kuphela ukufaka isilawuli. Ukuyisebenzisa Kulokhu ezifanelekayo capacitor hlobo. Ukuze operation evamile amplifier, ochwepheshe abaningi batusa solder strainers.
Indlela ukhetha umuntu oyisibonelo?
Okokuqala uma uthenga kubalulekile ukuhlola beacon amandla imodeli. Ukuze izicelo yezimoto, lokhu ipharamitha 20 V. Le chips kuthiwa ukufakwa eziningi MT Series onobuhle. Amanye amadivayisi abe umsebenzi isiqalo ezibandayo. Icubungula kuthatha isikhathi isilinganiso imizuzwana 20. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuvama photoresists awafani. Ngokuvamile ungathola oyisibonelo ipharamitha 12 Hz. Kodwa akumelwe sikhohlwe mayelana nemibandela isitoreji sedivayisi. Ngokuvamile, okushisa aphansi ungathandi beacons. Izokubiza yisibonelo esihle esikhathini sethu abantu kungathi izinkulungwane 5. Deda.
Amamodeli Inkampani "Naviks"
Le nkampani ngokuvamile ukhiqiza GPS-kokulandela amabhikhoni izimoto. Ngobukhulu, abasakwazi icwecwe, kulula ukufaka. Okufakwayo ayatholakala onobuhle eziningi uhlobo oluyinhlanganisela. Kule ndaba lighthouse ukuba PC kungaba kwenziwe. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi amadivayisi lemikhiqizo uyakwazi ukusebenza amaza ezahlukene. Kulokhu, kuya kakhulu ngokuthi umthamo webhethri. Kwezinye izimo, onobuhle ayatholakala nge ukukhanya LED. Kulokhu, izinkomba Amadivayisi zihluke kakhulu. Izokubiza beacon kokulandela ezinhle inkampani endaweni ayizinkulungwane 4. Hlikihla.
Izibuyekezo "Naviks S30"
amakhasimende amaningi abaye bakuncoma ngayo amabhikhoni yalolu hlobo eliphezulu chips. Kulokhu, idivayisi uyakwazi ukusebenza imvamisa 12 Hz. abandayo stratum umsebenzi esimweni samanje lapho. Ukufakwa kwalesi imodeli silula, futhi eziningi izindawo akuthathi. Kudivayisi uyakwazi usebenze ngamandla webhethri abangaphezu kuka-20 V. Le-antenna kuleli cala has uhlobo esakhelwe ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kuphela nesisindo esithile beacon '50 ukubonisa uhlelo lisebenzisa standard. Ilungiselelo kuvezwa imodeli akadingi. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi rectifier e umkhiqizo samanje isetshenziswa iDemo-wave. Ingabe ukuphatha beacon ethungatha emakethe umthengi in ruble 4500.
Umbono mayelana "Naviks S20"
Kuze kube manje, lo beacon ethungatha kuyinto zithandwa kakhulu. Lena ngokuyinhloko ngenxa photoresistor izinga. Kulokhu isilawuli kule ukuguqulwa has uhlobo condensate. Lungisa ukuvama imodeli kungaba. Ngakho, kungenzeka ukuxhuma beacon amabhethri ngisho at 15 V. Le chip idivayisi isebenzisa MT chungechunge. Kufanele kuphawulwe ukuthi umsebenzi isiqalo ezibandayo insimbi kukhona. Visual okubonisa kudivayisi kungacinywa uma uthanda. Ilungiselelo ayidingeki. Ngqo yokuxhuma idivayisi kwenzeka ngokusebenzisa okukhipha coaxial. Kufanele kube beacon zokulandela esitolo mayelana ruble 4800.
Yini abantu bathini mayelana "Naviks M2"?
abathengi abaningi okufakiwe Tracker njengomuntu onokwethenjelwa ngempela. Kulokhu, uhlobo iDemo-wave isebenzisa photoresistor. Kufanele kuphawulwe ukuthi idivayisi kuyinto icwecwe futhi akuthathi isikhala kakhulu. Kulokhu ipharamitha iyona imvamisa ngezithuba 13Hz. Ukufakwa beacon wathi ulula. Car amabhethri Site ke amandla afinyelela ku-20 W. Chip kule beacon has uchungechunge-CT scan. Kufanele kuqashelwe ukuthi le ukuzwela zedivayisi impela high. Visual okuvezwa imodeli ethulwa ukukhubaza umsebenzisi unethuba. Kufanele kube emakethe le beacon endaweni ayizinkulungwane 5. Hlikihla.
Amamodeli brand "Tracker"
Beacons bophawu nemingcele awafani. Amamodeli we-nkampani inyathelisa kokubili izimoto, futhi abantu. Ethandwa kakhulu namuhla ubhekwa ilungiswe nge rectifiers evulekile. Photoresists amadivayisi ngokuvamile efakwe imvamisa low. Kufanele kuphawulwe ukuthi ukhetho ukuzwela e iningi nokulungiswa nxazonke 8 microns. Uma sicabangela kudivayisi komgwaqo, amandla onobuhle ezifana inikezwa yi amabhethri nge voltage ka 20 V. Izokubiza beacon izinga lemikhiqizo esifundeni ruble 4,500.
Ukubuyekezwa "Tracker 2099"
Wathi beacon ethungatha umntwana ngesikhathi sethu kakhulu. Nokho, bokwenza eyethulwe idivayisi ayatholakala. Okokuqala kubalulekile ukusho ukungabikho abandayo isiqalo umsebenzi. Kulokhu, liyisibonelo ezibukwayo kule imodeli ayikho indlela ukuze uvale. ukunemba ethungatha ka beacon okufakiwe impela high. Kulokhu, iseli Photoelectric esetshenziswa izinga.
Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa abathengi, idivayisi ahlahlele ezingavamile kakhulu. Ixhuma idivayisi PC ngokusebenzisa standard kungaba YUSB isixhumi. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu imodeli emakethe akufanele eziningi, futhi angathengwa ruble 4200 kuphela.
Model Incazelo "Tracker 3001"
Wathi beacon ngomkhondo umuntu, phakathi kwamanye amadivaysi has ngokunemba high. Kulesi rectifier, imodeli isetshenziswa ngozwelo eliphezulu. Kulokhu, lo photocell esetshenziswa antenna esakhelwe ngaphakathi. Kulesi zohlelo zokubonisa enikeziwe ngumkhiqizi yohlobo LED. Le modeli uyakwazi ukusebenza izinhlelo zokusebenza ezahlukene. Ngqo isivinini processing omelelwe Ngokwesibonelo lelisetulu. Isilawuli e nesibonelo esabekwa epholisayo hlobo.
Uma sikhuluma ukusebenza, ukuzwela ipharamitha kohlelo isezingeni 6 microns. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi emakhazeni lokhu beacon kungasetshenziswa. Libuye abazokwazi wasebenza ngawo ukushisa. Le divayisi ayikwazi ukumelana zinamandla esiphezulu 15 V. Esikhathini emakethe beacon ecacisiwe ngomkhondo umuntu nabathengisi ucela ruble mayelana 4700.
Okushiwo ngabantu mayelana "Tracker 7780"?
abathengi abaningi bakhetha lokhu beacon eliphezulu rectifier. It Ubamba isignali pretty masinyane. Lapho le divayisi nozwela 5 microns. Kufanele kuqashelwe ukuthi le divayisi ahlome ukuqalisa ikhompiyutha. Direct into kokulandela Kwenziwa ngokunemba okukhulu. Icubungula ku beacon akuthathi isikhathi esiningi. Lokhu ngokwezinga elikhulu sasishaywe kufezwa ngokusebenzisa ukufakwa entsha KR202 uchungechunge chip.
Uhlelo uye LED inkomba. imodeli wathi uyakwazi sokuqhuba imvamisa 22 Hz. Ukuxhumana "Google Meis" inikezwa kule ukuguqulwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi le inkomba ukukhanya kungenziwa ucishiwe uma amabhikhoni kunesidingo. Imele namuhla ethulwa imodeli esitolo ruble 4500.
Norma amasosha omzimba ngokumelene TPO kwabesifazane: izimbangela kanye nokwelashwa
HP Laptop 630: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa, izincazelo kanye nokubuyekezwa of abanikazi
Makeeva Anastasiya: Biography of actress Russian